VIDEO:-Booqashadii madaxweynaha soomaaliya ee magaalada Baledwayne
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqday magaalada Beledweyne ayaa sheegay in xaalad bini-aadamnimo oo aad u daran ay ka jirto qeybo ka mid ah Gobolka Hiiraan. Madaxweynaha ...
DHAGEYSO+SAWIRO:-Madaxweynaha soomaaliya oo hadal qiiro badan ka jeediyay Beledweyne
DHAGEYSO:-Safarkii madaxweyne gaas ee imaaradka carabta muxuu ku soo dhamaaday?
Madaxweynaha puntland cabdi wali maxamed cali gaas oo mudo afar malmood ah dalka imaaraadka carabta safar ugu mqanaa ayaa ku soo laabtay magaalada bosaaso ayaa faah faahin ka bixiyay safar ...
DHAGEYSO:-Madaxweynaha puntland oo hambalyo u diray gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka
Madaxweynaha puntland cabdi wali maxamed cali gaas oo mudo afar malmood ah dalka imaaraadka carabta safar ugu mqanaa ayaa ku soo laabtay caasimada ganacsiga puntland ee bosaaso . Madaxweyne gaas oo ...
Madaxweynaha soomaaliyaoo hambalyo u diray Guddoomiyaha la doortay ee Golaha Shacabka
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambalyo u diray Guddoomiyaha la doortay ee Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan. Madaxweynaha ayaa ku ammaanay Guddoonkii KMG ahaa ee ...
DHAGEYSO:-Ibraahim Isaaq Yaroow Markii laga guulaystay gudoonka golaha shacabka muxuu sheegay?
Ibraahim Isaaq Yaroow ayaa hadal kooban sheegay ka dib markii lagaga guulaystay tartankii gudoomiyaha barlamanka soomaaliya wuxuu sheegay" "Hadaad dhaxdhaxaad ka ahaan laheedeen doorashada isbadalka iyo rajada umada wixii aan ...
DHAGEYSO:-Gudoomiyaha cusub ee Golaha Shacabka oo hadal kooban jeediyay
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa doortay Gudoomiyaha Baarlamaanka Hoggaamin doona Saddexda Sano ee socota ka dib Doorasho ka dhacday Magaalada Muqdisho. Hoos ka dhageyso hadal kooban uu jeediyay gudoomiyaha cusub ee barrlamanka ...
DAAWO SAWIRO:-Madaxweyne Farmaajo oo Gaadhey Baledweyne oo Kumanaan Ruux Ku Dayacanyihiin
Madaxweynaha jamhuuriyadda federalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafti uu hogaaminayo ayaa gaadhey magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo fatahaad shabelle ay kudhufatay. Madaxweynaha ayaa waxaa garoonka ku ...
Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan oo Hambalyo u diray shacabka soomaaliyeed
Xildhibaannada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa guddoomiyahooda cusub waxay u doorteen xildhibaan Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan. Hoos ka akhriso qoraal uu wax yar ka hor soo dhigay bartiisa facebook ...
Akhriso:-Taariikhda Guddoomiyaha cusub ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya u doortay Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ka dib doorasho ka dhacday Muqdisho. Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan waxa uu ku dhashay magaaladda Baydhabo sannadkii ...